N'Anambra, Abang Ejiela Ndị Uweojii E Buliri n'Ọkwa Ejiji Ọhụrụ | Igbo Radio
Igbo sị na ezi ọrụ nwere ezi ụgwọ; ma sịkwa ọ na-abụ onye e nyèrè mara chịkwaa, e nyekwuo ya nke ka nkè. N'ịgbaso nke a, onyeisi ndị uweojii na steeti Anambra, bụ CP John Abang ejiela ndị uwe ojii dị mmadụ otu narị na iri na atọ (113) ejiji ọhụrụ, dịka e buliri ha n'ọkwa 'Assistant Superintendent of Police' (ASP).
Mmemme iji ndị ahụ ejiji ọhụrụ ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'isi ụlọọrụ ndị uweojii dị n'Amawbịa, ma bụrụkwa nke e mere n'ịgbasò mbuli ahụ onyeisi ndị uweojii na Nigeria, bụ IGP Muhammed Adamu buliri ndị uweojii dị puku isi na narị isii na ótù (6,601) n'ala Nigeria na nsonso a.
Mbuli n'ọkwa ọhụrụ ahụ, dịka o siri dòó anya, bụ otu n'ime ụzọ isi ọchịchị ụlọọrụ ndị uweojii n'ala Nigeria si agbà ndị uweojii ume ka ha na-arụsi ọrụ ike; ma bụrụkwa nke a na-agbaso usoro kwesiri ekwesi nakwa itozùòkè wee na-eme.
N'okwu ya oge ọ na-eji ndị ahụ ejiji ọhụrụ ahụ, Maazị Abang tòrò ndị ahụ e buliri n'ọkwa ọhụrụ ASP site n'ọkwa Inspectorate ha nọbụ mbụ, ma chetara na ọ bụ site n'ihe ha rụpụtara n'ọrụ ka ha jiri nweta mbuli n'ọkwa ahụ. O nyezịkwara ha ndị ahụ ndụmọdụ ka ha jisie ike n'ọrụ karịa, ugbu a e buliri ha n'ọkwa, iji were ọkwa ọhụrụ ha ahụ rụpụta ihe a hụrụ anya karịa ka ha mere na mbụ.
O chetekwààrà ha na o nwere ụfọdụ ihe a na-atụzị anya ya n'aka ha ugbu a n'ihi ọkwa nọ na ya, ma nwekwa ụfọdụ ihe e kwesighịzị ịdị na-ahụta ebe ha nọ ugbu a.
Na nzaghachi ha n'otu n'otu n'aha ndị ọzọ, ụfọdụ n'ime ndị ahụ e buliri n'ọkwa ọhụrụ, nke gụnyere ASP Amaoge Ann Okoye, ASP Umoru Ejima, na W/ASP Chinenye Ochiobi kelere isi ọchịchị uweojii ala Nigeria, onyeisi uweojii, bụ IGP Adamu, nakwa onyeisi ndị uweojii n'Anambra, bụ CP Abang maka ezi nkwàdo ha, na ịhụta ha dịka ndị tozùrù òkè ịgbago n'ọkwa ọhụrụ ahụ.
Ha kwezịrị nkwà iji ọkwa ọhụrụ ahụ wee rụọ ọrụ nke ọma, mepụta ihe a hụrụ anya karịa ka ha mere na mbụ, ma jigidekwa ùgwù dịịrị ọrụ uweojii.